Iindaba-Ushicilelo oluDityanisiweyo lweCip4 Umsebenzi wokususwa kweNkunkuma” YiNdlela yoShishino kwiKamva
UShicilelo oluDityanisiweyo lweCip4 Umsebenzi wokususwa kweNkunkuma” YiNdlela yoShishino loShishino kwixesha elizayo.
01 Yintoni i-co-printing?
I-O-printing, ekwabizwa ngokuba yi-imposition printing, kukudibanisa iphepha elifanayo, ubunzima obufanayo, inani elifanayo lemibala, kunye nomthamo ofanayo wokushicilela kubathengi abahlukeneyo kwipleyiti enkulu, kwaye usebenzise ngokupheleleyo indawo yokushicilela esebenzayo umshicileli we-offset ukwenza ibhetshi kunye noshicilelo lwesikali.Izinto eziluncedo, ukwabelana ngeendleko zokushicilela kunye, ukufezekisa injongo yokonga ukwenza ipleyiti kunye neendleko zokuprinta, luphawu oluqhelekileyo loshicilelo lwentengiso lwangoku.
Iingenelo zokuprinta ngokubambisana zixabiso eliphantsi leyunithi kwaye zinokuveliswa ngamanani amancinci, anokuthi ahlangabezane nonxibelelwano lwe-brand ngokubanzi umgangatho worhwebo wokushicilela kunye neemfuno zevolumu yoshicilelo.
Okwangoku, kukho amakhadi eshishini ngokubanzi, amaphepha anemibala, kunye nezincamathelisi zemiba eprintiweyo edibeneyo.Izincamathelisi zohlulwe zibe zizincamathelisi ezisikwayo kunye nezincamathelisi eziqhelekileyo.Amakhadi oshishino kunye namaphepha ombala angokwezinto eziqhelekileyo zokusika, akunzima ukuzisebenza.Kwiimveliso zokuzibamba, siya kubonelela ngezisombululo ezilungileyo ngokubhekiselele kwimimese yokusika kunye nokulawula uxinzelelo.
Ekubeni iimveliso zenguqu edibeneyo zingabathengi abahlukeneyo, iimveliso eziprintiweyo kufuneka zinqunywe kwaye zihlulwe.Ukushicilela izityalo, ukuhambisa ezahlukeneyo pizinto eziprintiweyo kubathengi abahlukeneyo ngexesha elifutshane, abathengi bafuna ibhetshi yoomatshini bokusika obuphezulu, kwaye emva koko bagqibezele umsebenzi wokusika ngokukhawuleza.
02 Iqela laseGuowanguneminyaka engama-25 yamava kwimveliso yomatshini wokusika iphepha.Ijolise kwiimpawu zokushicilela ngokubambisana, iqalise inkqubo yokusika i-CIP4 yasekhaya ehamba phambili, eye yasombulula iingxaki zabathengi abadibeneyo kwinkqubo yokusika.
Inkqubo yokusika iGuowang CIP4 ineengenelo ezicacileyo kule miba ilandelayo:
1. Isantya sokuhlalutya kweefayile ze-JDF zikhawuleza, kungakhathaliseki ukuba yifayile eyinkimbinkimbi okanye elula, inokuvelisa inkqubo yokusika ephuculweyo kakhulu ngexesha elifutshane kakhulu;
2. Iifayile eziveliswayo ziyakwazi ukuguqulwa kakhulu, kwaye i-steering kunye nenani leemela zokusika zinokufikelela kwi-processing user-friendly processing.
3. Ifayile eveliswayo inomsebenzi wesikhokelo se-animation ukukhokela ukusebenza kwabasebenzi bokusika.Unobubele kakhulu.
Ixesha lokuposa: Aug-09-2021